कांग्रेस उम्मेदवारको घरमा बम बिस्फोट
भोजपुर, असार १३ । नेपाली कांग्रेसका वडाअध्यक्षका उम्मेरदवार घरमा बम विष्फोट भएको छ ।
मतदाताको पिरलोः पहिरोले पुर्ने हो कि बमले उडाउने हो ? भोट त हाल्नै पर्ने !
धनगढी, असार १३ । कैलारी गाउँपालिका वडा नम्बर ६ का सोमलाल दङौरी स्थानीय निर्वाचनमा मतदान गर्न आतुर छन् । तर, उनी चुनावमा भोट हाल्न जाँदा कतै पहिरोले पुर्ने हो कि बम पड्एिर उडाउने हो ? भन्ने त्रासमा पनि छन् ।
निर्वाचनको अघिल्लो दिन प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै राजपाकाे यस्तो माग (विज्ञप्तीसहित)
काठमाडौं, असार १३ । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले निर्वाचनको अघिल्लो सन्ध्यामा प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै गाउँगाउँमा सरकारले त्रास फैलाइरहेको र यस्ता गतिविधि तत्काल रोक्न माग गरेको छ ।
यी हुन् बलिउडका हिट पिता फ्लप छोरा
बलिउड–बलिउड कुनै समय हिट रहेका कलाकारहरुका सन्तानहरु पनि फिल्मी लाइनमा रहेका छन् ।
लण्डनमा एनआरएन संस्थापक महतोसँग अन्तरकृया 11 hours ago
लण्डन । केहि दिनको भ्रमणका क्रममा बेलायत आएका गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएन)का संस्थापक अध्यक्ष डा उपेन्द्र महतोसंग लण्डनमा एक भेटघाट तथा अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको छ ।
आमिर खानको फिल्म ‘दंगल’ ले बनायो नयाँ रेकर्ड, राजमौलीको फिल्म ‘बाहुबलीः २’ पछि पर्यो
एजेन्सी–बलिउडका सुपरस्टार आमिर खानको फिल्म ‘दंगल’ ले विश्वभर २००० करोड भारतीय रुपैया कमाउने पहिलो भारतीय फिल्म बनेको छ ।
लण्डनको रातो बसमा नेपाली कलाकारको सेतो पुतली (फोटो फिचर )
केहि समयदेखि लण्डनको विभिन्न ठाउँमा आफ्नो कला 'सेतो पुतली' टाँसेर शान्ति र सदभावको सन्देश विश्वभरी छरिहेका नेपाली कलाकार मिलन राईलाई गत आईतबार एउटा अर्को अविस्मरणीय ठाउँ जुर्यो लण्डनको विश्व प्रसिद्ध रातो बस ।
यस्ता छन एनआरएन अष्ट्रेलिया हाँक्न चाहनेहरु
सिड्नी । एनआरएन अष्ट्रेलिया यतिबेला नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रियामा छ । अघिल्लो पटकको निर्वाचनका क्रममा देखिएको जस्तो चहलपहल र जोड घटाउ यस पटक पनि छरपस्टै भएको छ ।
यी चर्चित बलिउड अभिनेत्री जसले आफ्नौ तौल घटाएका थिए
यी चर्चित बलिउड अभिनेत्री जसले आफ्नौ तौल घटाएका थिए । पाकिस्तानमा पहिलोपटक हिन्दी फिल्मको रिमेक बन्दै !
भारत र पाकिस्तानको दुश्मनी सीमाक्षेत्रमा मात्रै होइन खेल, कला लगाएतका अन्य क्षेत्रमा पनि अक्सर देख्न पाइन्छ । बलिउडका धेरैजसो चर्चित फिल्महरु पाकिस्तानमा प्रदर्शन गर्न प्रतिबन्ध लगाइएका खबरहरु सुन्नमा आइरहन्छन् ।